Global Voices teny Malagasy · 18 Aogositra 2010
18 Aogositra 2010
Janoary 2021 45 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 18 Aogositra 2010
Ny fepetra vaovao noraisin'ny Mpitandro ny Fifamoivoizana any Delhi dia mampisongadina ireo olan'ny fandraisan'ny olom-pirenena anjara sy ny fampiasàn'ny governemanta ny media sosialy any India.
Afrika Mainty18 Aogositra 2010
Naneho ny fandresen'i Paul kagame mibaribary ny santatry ny valim-pifidianana navoakan'ny Komity Nasionaly misahana ny fifidianana. Midika inona ho an'i Roanda ny fandresen'i Kagame? Tamin'ny fomba nalalaka sy nadio ve ny fifidianana? Inona ireo zava-dehibe tsy maintsy atrehan'i Roanda amin'izao fotoana izao raha vita iny ny fifidianana? Ireo no lohahevitra...